Critic » သက်ဆိုင်သူများ အားလုံး သို့	19
ဦးဦးပါလေရာ says: လောလောဆယ်တော့ ..
မြစပဲရိုး says: မှန်ပါတယ် ကိုပါ။
kai says: အကြမ်းအားဖြင့်တော့.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က.. ဒီအချိန်မှာ ဆန်း.. လာဘ်အတက်ဆုံးအချိန်…
အဲဒီလိုထင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: သဂျီးမင်းလည်း ဇာတာ ဆန်း လဂ်တွေကို အယုံအကြည်ရှိတာပဲကိုးးး
သဂျီးအတွက်လည်း ဇာတာ ဆန်း လဂ် တက်ဖို့ အစီအရင်တွေ လုပ်ပေးရမလားးး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14462
kai says: ကျုပ်မြင်တာကတော့.. တခုထဲ…
သဘာဝ… ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ကြည့်ရတာ သူကြီးမင်း ရဲ့ သတင်းစာလုပ်ငန်းကြီး အောင်မြင်တာလဲ “စန်း” ရှိလို့ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျွန်မ ကြားဖူးတဲ့ စကားပုံ ကတော့ “”the squeaky wheel gets the grease.” တဲ့။
Thint Aye Yeik says: ဒီအခြေအနေကိုလည်း အမေစု ကိုင်ကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပဲ တွေး ယုံနေမိတယ်
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: သပိတ်မကလို့ ဒယ်အိုးပဲ မှောက်မှောက်
လုံမလေးမွန်မွန် says: တိုင်းပြည်ကို ပြန်အဖက်ဆယ်နေပါတယ်ဆိုမှ… ခလုတ်ကန်သင်းတွေက ဝင်လာတယ်…. ရှေ့လူတွေထားခဲ့တဲ့ အရှုပ်ထုတ်တွေ ဒီလောက်များတာ.. ခုဟာက ကူမရှင်းပေးတဲ့အပြင်..အမှိုက်ထပ်ဖွတော့… အမေပဲ ပင်ပန်းတာပေါ့… ဟုတ်တယ်.. အမေစု လုပ်နိုင်တယ်.. ဒါပေမယ့် အချိန်ကုန်တယ်.. လူပင်ပန်းတယ်.. နှောင့်နှေးတယ်… တကယ်ကို ကျက်သရေတုံးတာတွေပါ… ဆန္ဒပြဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲနေချိန်မှာ.. ပညာတစ်ခုခုကို လေ့လာလိုက်စားလိုက်ရင်တောင် ပညာရေးအတွက် အထောက်အကူပိုဖြစ်ဦးမယ်…
မြစပဲရိုး says: ဆက်ဆက် – အခု အစိုးရ လက်ထက် မှာ ကန့်လန့်တိုက်သူရှိခဲ့ရင် အစိုးရ က သိပ်ပြီး ဖြေရှင်းဖို့တောင်မလိုဘူး။
ဦးကြောင်ကြီး says: ကျောင်းသားတွေက မဟုတ်တန်းလျား ပုတ်ခတ်ဝေဖန်သူတွေကို တရားစွဲတော့မယ်တဲ့.. … ဖမ်းခံရတော့မယ်ဟေ့.. ဖမ်းခံရတော့မယ်…. ဝမ်းသာလိုက်ထှာ..
မြစပဲရိုး says: အာ့ဆို နီ အရင် ဝင်ရမှာ။ နာ လဲ ကျောင်းသား ဟဲ့။
မပုတင် တောင် ပြချင်သေး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: မိုးသီးကြောင်ကို ဆန့်ကျင်ကြ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဝေါင်း – ကြောင် က မိုးသီး ဆို နို့ဆီထည့်ပြီး ခလောက် သောက်လိုက်ကြရအောင်။ lol:-))) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2714
ကထူးဆန်း says: ဖြစ်ခဲ့ သမျှ ကျောင်းသား အရေးအခင်းတွေ မှာ အဲ့ အချိန်က တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်
ခင်ဇော် says: ကိုကိုထူးဆန်းပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ်။
မြစပဲရိုး says: ကျောင်းသား တွေ ကို အပြစ်မတင်ပါ။ ကျောင်းသား မဟုတ် ဘဲ ကျောင်းသား ယောင်ဆောင်နေသူများ နဲ့ နောက် က မီးထိုးပေးနေသူများ ကို တော့ မြင်အောင် ပြ ရမှာပါဘဲ။
မြစပဲရိုး says: သူတို့ တွေကြောင့် ကျွန်မ အွန်လိုင်းစုံးမ ဖြစ်နေရတာ ၆နှစ် ကျော်ပါပြီ ကထူးဆန်းရယ်။
uncle gyi says: အခုထောင်ကထွက်လာတဲ့မျိုးဆက်တွေဘယ်သူတွေခေါင်ဆောင်ခဲ့သလဲကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းပါတယ်